Nhau - Maitiro ekugadzirisa dambudziko rekusara mushure mekucheka nesimbi laser yekucheka muchina
Maitiro ekugadzirisa dambudziko rekusara mushure mekucheka nesimbi laser yekucheka muchina
Izvo zvakasara pamusoro pesimbi yesimbi mushure mekucheka nesimbi laser yekucheka muchinainonzi slag.Metal laser yekucheka michina inogadzira kupisa kwakawanda panguva yekugadzirisa.Kazhinji, kupisa kunogadzirwa panguva yekucheka kunoparadzirwa mukati mese workpiece pamwe chete nekerf, uye workpiece inobva yatonhodzwa zvakakwana.Nekudaro, kana uchicheka madiki-gomba workpieces, kunze kwegomba kunogona kunyoroveswa zvakakwana, uye mukati megomba rine nzvimbo diki yekupisa kupisa, uye kupisa kwakanyanya kukonzeresa kukonzeresa slag.
Mushure mekucheka slag, tanga watsvaga chikonzero kubva pane zvinotevera pfungwa:
①Kutarisisa kwelaser beam kwakatsauka
Kana iyo yakatarisa iri pedyo zvakanyanya kana kure, inokanganisa hutano hwekucheka, uye inogona kungogadziriswa nekuongorora uye kugadziriswa maererano nechinzvimbo chekugadzirisa.
②Isina kukwana laser inobuda simba
Pakucheka mahwendefa akakora, simba harina kukwana kunyungudutsa ndiro yose.Kana simba richiri kugadziridzwa, unogona kuwedzera simba uye ramba uchiyedza kana rinogona kugurwa.Kana simba racho rakagadziridzwa kusvika pakakwirira, unoda kutsiva laser nepamusoro pesimba.
③Kudzvanywa kwemhepo kwegasi rekubatsira hakuna kukwana
Iyo yekubatsira gasi inogona kuvhuvhuta kubva kukucheka slag uye kutonhora kupisa kwakakanganiswa nzvimbo yekucheka.Kana kudzvinyirira kwemhepo kuri kudiki, zvakasara hazvizoputirwe kunze kweworkpiece kana workpiece haizotonhodzwe nenguva, zvichikonzera kuumbwa kwe slag.Gadzirisa kudzvanywa kwemhepo kune saizi yakakodzera.
④Kumhanya kwekucheka kunokurumidza kana kunonoka
Kana iyo yekucheka kumhanya yekucheka kwelaser yakakurumidza, iyo workpiece haizogurwe nenguva, iyo yekucheka nzvimbo inoumba diagonal mitsetse, uye pachava ne slag munzvimbo yakaderera hafu.Kana kukurumidza kucheka kunonoka, kunyunguduka kwakanyanyisa kuchaitika, iyo yose yakachekwa yepamusoro ichava yakaoma, musono wekucheka uchave wakafara, uye pachava ne slag yakaturika muchikamu chepamusoro.
Izvo zviri pamusoro ndicho chikonzero nei iyo simbi laser yekucheka muchina inosiya zvakasara pane simbi pamusoro mushure mekucheka.Tinogona kugadzirisa midziyo maererano nepamusoro mhinduro kuti tiwane zviri nani kucheka maitiro.
Yakaburitswa naJinanAPEXMachinery Equipment Co., Ltd.
Nguva yekutumira: Jun-23-2022